Falanqaynta Shumaca: Shumaca Doji | vfxAlert official blog
Falanqaynta shumaca Qaybta 2: calaamadaha dib u celinta ugu xoogan «Doji» iyo talooyinka
Qaybta koowaad waxay baari jirtay fikradaha aasaasiga ah ee falanqaynta laambadda, sii wadida iyo tirooyinka dib u noqoshada. Waxaan u dhaqaaqeynaa calaamadda ugu xoogan ee isbeddelka isbeddelka iyo sida looga fogaado khaladaadka isticmaalka shumaca ee istiraatiijiyadda ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah.
Calaamadda ugu adag ee dib u noqoshada oo lagu muujiyey qayb gaar ah oo falanqaynta shumaca. Xeerka aasaasiga ah - marba marka ka yar waxaa jira shumac doji shaashadiisu intay ka muhiimsan tahay oo natiijada ugu xasiloon ayaa lagu arkaa waqtiyada laga soo bilaabo M30 iyo wixii ka sareeya. Waqtiyada gaagaaban shumacyada ayaa noqda kuwa aad u badan, waxay joojiyaan shaqada.
Dukaanka caadiga ah, sicirka xiritaanka wuxuu u dhigmaa qiimaha xiritaanka +/- dhowr shilin. Laakiin haddii jirka shumaca, inkasta oo uu yar yahay, laakiin haddana uu si muuqata u muuqdo, falanqaynta shumaca caadiga ahi wuu shaqeeyaa mise maya? Ma jiraan shuruudo adag, wax walbana waxay kuxiran yihiin celceliska isbeddelka hantida. Mararka qaarkood xitaa 2-3 dhibcood waxay noqon karaan xaalad caadi ah. Sidoo kale raadi xaqiijin dheeri ah, sida xad dhaafka / iibinta ama ka gudubka Celceliska Dhaqdhaqaaqa.
Si kastaba ha noqotee, shumacyada noocan oo kale ah (xitaa haddii ay been yihiin) waxay u baahan yihiin ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah; haddii kale, waxaad khasaare weyn ka heli kartaa isbeddellada isbeddelka fiiqan!
Shumac cad oo dheer kadib (dusha sare)
Mugga wax iibsigu wuu dhammaaday, waana muhiim in la fahmo in shumacani uusan micnaheedu ahayn in isu dheelitirka awoodu dhab ahaantii bilaabmayo inuu u beddelo jihada iibiyaasha. Halkii, suuqa wuxuu ku jiraa xaalad aan hubin. Falanqaynta saxda ah, waxaad u baahan tahay ugu yaraan seddex shumacyo soo socda oo xaqiijinaya dib u noqosho ama bilowga isugeynta.
Hoos u dhaca, saxnaanta calaamadaha doji ayaa dhacaya, sida qaababka kale ee laambadda. Sababta ayaa ah in dadaal dheeri ah loo baahan yahay si qiimaha loo dhaqaajiyo halkii loo kordhin lahaa. Dhibaatadu waxay ku jirtaa cilmu-nafsiga: inta badan ciyaartooyda yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, way fududahay in la fisho sixitaan ama dib u noqosho in la bilaabo halkii laga furi lahaa boosaska cusub ee 'SAYLKA', kaliya kuwa sameeya suuqa ayaa yareeya qiimaha. Xitaa haddii uu jiro shumac tilmaamaya dhamaadka dhaqdhaqaaqa, hantida wali way ku dhici kartaa heerarka sugaya Macaashka weyn ee sugaya.
Shumacyada Doji ee saldhigyada waxay u baahan yihiin xaqiijin ka badan shumacyo dusha sare jooga!
«Cagaha Dheer», «Rickshaw Man» iyo «Qabriga»
Shumacyadan ayaa sidoo kale muujinaya in suuqa uu "daallan yahay" ama sida falanqeeyayaasha Japan ay leeyihiin isbeddelku "wuu ka lumay" .Laakiin halkan xaaladdu waa ka duwan tahay sidii hore. Haddii shumac cad oo dhaadheer uu muujinayo daciifnimo iibsadayaasha, markaa hooska sare ee dhererka "Lug-dheer" ama "Gravestone" Doji wuxuu muujinayaa iibiyeyaashu inay si joogto ah isugu dayayaan inay joojiyaan kor u kaca.
Qiimuhu wuu sii socdaa laakiin wuxuu si joogto ah ugu socdaa iska caabin xoog leh, taas oo ku celisa ku dhowaad heerka furitaanka.
Tilmaamaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah wuxuu aaminsan yahay in «Rickshaw Man» uu muuqdo markii isku dayga lagu beddelayo isbeddelka uu ku dhammaado isku-dheelitirnaan ku-meel-gaar ah oo udhaxeysa dibida iyo bahasha, sida lagu caddeeyey hadh isku dhow iyo jir yar.
Ganacsatada xirfadleyda ah waxay rumeysan yihiin in "Rickshaw Man" ay noqon doonto calaamadda dib u noqoshada, kaliya haddii ay ku xigto ugu yaraan hal Doji caadi ah, ka joog suuqa!
Kooxdani waxay leedahay qaabka ugu adag ee dib u noqoshada. Ku dhowaad kuma muuqato qaabka caadiga ah, inta udhaxeysa bidix iyo midig Doji waxay noqon kartaa 2-3 shumacyo kala duwan. Waxay si fiican uga shaqeysaa dusha sare iyo saldhigyada.
Qof kastaa ma isticmaali karo falanqaynta laambadda. Waxaad ubaahantahay inaad awoodid inaad garatid qaababka aasaasiga ah markaad jaleecdo. Foomka caadiga ah, waxay ku dhowdahay inaysan dhicin; xusuusta muuqaalka ah ayaa si weyn loo raray, gaar ahaan waqtiyada yar yar ee ay yar tahay waqtiga falanqaynta.
Hagaag, ma ahan wax xun: waxaa jira habab lagu xifdiyo macluumaadka muuqaalka ah, dooro midka adiga kugu habboon. Xitaa haddii aad doorato istiraatiijiyad “aan garaaf ahayn” ama calaamado ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh: tilmaamayaasha farsamada, dhacdooyinka aasaasiga ah ama mugga suuqa lama iloobi karo falanqaynta laambadda .
Shumacyada ma noqon karaan qodobka kaliya ee go'aan gaarista. Waxaa laga yaabaa in 200 sano ka hor sidaas ahayn, waxay ahayd suurtagal in si guul leh looga ganacsado oo keliya isku darka shumaca. Waxaa jira arrimo farsamo badan iyo arrimo aasaasi ah oo dibedda laga tixgeliyo hadda. Qaababku waxay muujinayaan oo keliya suurtagalnimada in suuqa uu ka laaban doono ama uu sii wadi doono isbedelka hadda socda.
Qalab ganacsi oo badan. Maqaalka waxaa ku jira kaliya isku-darka ugu fudud ee shumaca, laakiin waxaa jira hoos u dhac ku yimaada caannimadooda. Tirooyinka noocan oo kale ah isla markiiba waxay soo jiitaan dareenka, ganacsaduhu wuxuu "u jiidi karaa" qaabka caadiga ah, in kastoo aysan jirin wax shuruud ah tan. Suuqa sameeyayaashu sidoo kale way arkaan iyaga oo qofna wax uga qaban kara. Tusaale ahaan, iyadoo Doji xagga sare ku taal, fur mug weyn oo sii wad isbeddellada halkii aad ka noqon lahayd dib u noqosho.
Waxaad dooran kartaa istaraatiijiyad taxaddar leh oo tartiib tartiib ah u kordhinaysa booska maaddaama calaamadda la xaqiijiyay. Ama ganacsi dhif ah, laakiin sidoo kale qaabab faa'iido leh, sida "Saddex tuubbo madow" (dib u celin) ama "Qeyb" (sii wadid). Ganacsatada badankood ma yaqaanaan iyaga, sidaa darteed xasilloonidoodu way ka sarreysaa (gaar ahaan waqtiyada sarreeya).
Xakamee "nolosha" shaxanka. Suurtagalnimada burburka shumaca ayaa si toos ah ugu dhigma waqtiga jiritaankiisa shaxda. Haddii aysan jirin dhacdooyin adag, ciyaartoy waaweyn ayaa bilaabi kara inay "boodaan" suuqa; xilliyada aamusnaanta wax faa'iido ah uma leh iyaga. Iyo, waxay u muuqan doontaa, moodal lagu kalsoonaan karo ayaa si dhakhso leh isugu beddelaya isku-dhaf aan macno lahayn oo shumacyo ah. Istaraatiijiyad kasta oo ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah, waa inay jirtaa shuruudo ku saabsan sawirka "xun" goorta la xidhayo jago iyada oo aan la tixgelin macaashka / luminta hadda jirta.
Isku day inaad u dhaqanto sida caadiga ah intii suurtagal ah. Haddii aadan furi karin macaamil bilowga ama barta xoogga leh ee shaxanka, ha u raadin barta laga soo galo ee uusan dhab ahaan ka jirin. Sug saxitaanka oo halkaas ka raadi suurtagalnimada macaamil ganacsi dib u noqosho ah. Laakiin xusuusnow, falanqaynta laambadda waxay ku lug leedahay kaliya hal saxitaan ama dib u celin. Laakiin samee xulashada ugu dambeysa iyadoo lagu saleynayo xaaladda hadda jirta iyo macluumaadka laga helo tilmaamayaasha kale.
Raadi xaqiijin dheeraad ah. Falanqaynta shamaca waa in had iyo jeer lagu taageero qalab farsamo, gaar ahaan heerarka taageerada / iska caabinta. Ka eeg dhaqdhaqaaqa qiimaha dhowr jadwal, joogitaanka kaladuwanaansho iyo isbeddello fiiqan oo mugga ah.
Soo koob ha la. Falanqaynta laambadda waxay ku habboonaan doontaa ugu yaraan 10-20 sano oo kale, inkasta oo kororka isticmaalka AI iyo HFT ee ganacsiga. Inta badan macaamilada saamiyada wali waxaa sameeya dadka, taas oo macnaheedu yahay in mabaadi'deeda ay sii wadi doonto inay shaqeyso oo ay sameyso calaamadda binary ee macaashka.